97 dhalinyaro ah ayuu haleelaa cudurka dilaaga ah ee HIV/ADIS maalin kasta dalka Kenya - Horn Future
Nairobi-Golaha Qaranka Kenya ee La-dagaallanka cudurka HIV/AIDS ayaa waxa uu daaha ka fayday in isku celcelis heerka dhalinyarada ee uu haleelo virus ka “HIV” ee sababa burburinta unugyada difaaca ee jidhka bini’aadanka ee “AIDS”, ay gaadho 97 dhalinyar ah maalintii.
Agaasimaha Golaha Qaranka Dr. Nduku Kilonzo ayaa war saxaafadeed ku sheegtay in 71 kun iyo 34 oo xaaladood oo cusub oo uu haleelay cudurkan oo kamid ah dadka waaweyn sanadkii 2015 uu ku dhacay 35 kun kooxda da’deedu u dhaxeeyso “15-24” jir,taasoo ka tarjumeeysa in isku celcelis heerka dhalinyarada uu haleelo cudurkani ay gaadhayso maalin kasta 97 .
Waxa masuulkani ay intaa ku dartay in “hordhaca mashaariicda cusub ee waaweyn ee dalka ka socda ,sida mashruuca balaadhinta dhabada tareenka ee isku xidhaysa caasimada Nairobi iyo magaalada Nifasha ee gobolka Rift Valley in uu gacan weyn ka geysatay in tirada uu haleelo cudurkan ay kor u kacdo “, iyadoo aanan cadeeynin jiritaanka xidhiidh ka dhexeeya labadan arrimood.
Waxay sido kale faahfaahin ay ka bixisay in “meelaha tareenka laga raaco iyo goobaha bulshadu ku xidhiidho ay saameeyn wayn ku leeyihiin kor u kaca tirada cusub ee uu haleelo cudurkani, gaar ahaan meelaha magaalooyinka ah,” iyada sidoo kale aanan bixin faahfaahin dheeraad ah.
Xogta cusub ayaa waxa ay muujisay in heerarka ugu sareeya ee haleelitaanka cusub ee cudurkan ee dhalinyarada laga diiwaan galiyay magaalada Nairobi iyo magaalada dekedda ah ee Mombasa.
« Inauguration d’une gare de TGV à Ankara	» Kumanaan dibadbaxayaal ah oo codsaday in ay is-casisho madaxweynaha Koonfurta Kuuriya kadib faro-galin ay sameeysay saaxibadeed.